ZBN Nitrogen jenareta - China Hangzhou Poly Air Separation Equipment
ZBN Nitrogen jenareta
Nheyo Psa nevezera famba adsorption senitrogen kugadzira muchina Hangzhou Poly mhepo kuparadzana midziyo mukugadzira Co., Ltd. inobva panheyo kufurirwa famba adsorption, vachishandisa yepamusoro kabhoni samolecular nomusero somunhu adsorbent, pasi mumwe kumanikidzwa, kugadzirwa senitrogen kubva mhepo. Pashure wokunatswa akaoma compressed mhepo, kumanikidzwa adsorption uye desorption mu Vacuum adsorber. Nokuda aerodynamic chaizvoizvo, okisijeni diffusion mwero iri kabhoni samolecular Sie ...
Nheyo Psa nevezera famba adsorption senitrogen nokuparira Machine
Hangzhou Poly mhepo kuparadzana midziyo mukugadzira Co., Ltd. kwakavakirwa chinobva kufurirwa famba adsorption, vachishandisa yepamusoro kabhoni samolecular nomusero somunhu adsorbent, pasi mumwe kumanikidzwa, kugadzirwa senitrogen kubva mumhepo. Pashure wokunatswa akaoma compressed mhepo, kumanikidzwa adsorption uye desorption mu Vacuum adsorber. Nokuda aerodynamic chaizvoizvo, okisijeni diffusion mwero iri kabhoni samolecular nomusero iri yakakura zvikuru kupfuura senitrogen, uye okisijeni iri preferentially adsorbed nokuda kabhoni samolecular nesefa, uye senitrogen kunowedzerwa mune gasi Pasika. Uye zvadaro kuoma wakaderedzwa kusvika kwomuzvarirwo kumanikidzwa, uye adsorbent akanga dzakabatanidzwa yakachena nezvimwe netsvina. General pazvinoitwa ezvinhu maviri adsorption shongwe, mumwe shongwe senitrogen adsorption vanokwanisa, mumwe neshongwe desorption patsva, kuburikidza PLC chirongwa controller kudzora gasi vharafu kuvhura nokuvhara zvokuti shongwe maviri kutenderera, kuitira kuti vawane chichiitwa kugadzirwa yepamusoro senitrogen zvinangwa. Yose yezvinhu ine zvinotevera zvinoriumba: compressed mhepo kucheneswa module, mhepo kuchengetwa tangi, okisijeni senitrogen kuparadzana mudziyo, senitrogen buffer tangi.
1, compressed mhepo yokuzvinatsa zvinoriumba
Mhepo compressor kupa compressed mhepo kutanga kuitika munzvimbo compressed mhepo yokunatsa zvinoriumba, compressed mhepo kubva nenyere Sefa kubvisa dzakawanda mafuta, mvura, guruva, uye Ndinoda Dryer kumwe kuwedzera kwemvura, nemicheka mafuta Sefa, guruva, uye anoteverwa mu Ultra nemazvo Sefa kuti yakadzika acheneswe. Maererano nemamiriro ezvinhu, mhepo kuparadzana gadziriro dzedenga rakagadzirirwa kutaridza compressed mhepo mafuta kubvisa mudziyo, iyo inoshandiswa kudzivisa mukana micro mafuta kupinda uye kudzivirira zvakakwanira kabhoni samolecular nomusero. Strict namaapuro mhepo yokuzvinatsa kuurongwa nechokwadi upenyu basa kabhoni samolecular nomusero. Pashure kubatwa ne rokuti, mhepo yakachena inokwanisa kushandiswa chiridzwa mhepo.
22, mhepo okuchengetera tangi
Mhepo tangi iri kuderedza kuerera pulsation, Buffer; pakudaro achidzikisa kwokudzvinyirira kusiyana-siyana munyika, saka kuti compressed mhepo zvakanaka kuburikidza compressed mhepo yokunatsa zvinoriumba, kuitira kubvisa zvizere mvura netsvina, kuderedza unozotevera Mapisarema okisijeni senitrogen kuparadzana chikwata mutoro. Panguva iyoyowo, ari Absorção de Água neshongwe kuti chinja, uyewo inopa pfupi nguva nokukurumidza vavandudze kuti vakawanda compressed mhepo kuti Mapisarema okisijeni senitrogen kuparadzana mudziyo, iyo adsorption shongwe kufurirwa Kurumidza kumuka kumanikidzwa basa, nechokwadi zvokushandisa yakavimbika uye irambe ichishanda.
3, okisijeni uye senitrogen kuparadzana mudziyo
The adsorption shongwe uchinyanya kabhoni samolecular nomusero ndiye A uye B. Apo yakachena compressed mhepo anopinda A shongwe Inlet uye runoyerera kuburikidza kabhoni samolecular nomusero kusvika nzira yokubudisa pakuguma, O2, CO2 uye H2O vari adsorbed, uye senitrogen gasi iri ikatubuka kubva nzira yokubudisa kumugumo adsorption shongwe. Pashure kwenguva, carbon samolecular nomusero adsorption shongwe A. Panguva ino, A shongwe otomatiki vanorega adsorption, compressed mhepo aibuda kupinda B yakasimba okisijeni pakuburitswa senitrogen, uye A shongwe samolecular nomusero patsva. Pakuberekwa kutsva of samolecular nomusero chaitwa ne nokukurumidza raizouya adsorption shongwe kuti mumhepo vachimanikidzwa kubvisa adsorbed O2, CO2 uye H2O. mbiru mbiri dzakanga rave adsorbed uye regenerated kupedza kuparadzana reokisijeni uye senitrogen, uye kuramba goho kuti senitrogen. The pamusoro muitiro inotongwa programmable pfungwa controller (PLC). Kana nzira yokubudisa kuguma kuchena senitrogen saizi wakatarwa, PLC Chirongwa, otomatiki pokubuda napo vharafu kuzarurwa, kuti asakwanisa otomatiki senitrogen Kuburitswa mu, nechokwadi kuti asakwanisa senitrogen gasi hazvirevi ndokuyerera. The gasi pokubuda napo kana uchishandisa injini mafuro ruzha idukusa 75dBA.
4, senitrogen buffer tangi
The senitrogen buffer tangi rinoshandiswa kuti vakadengezera kuita uye rucheno senitrogen kuparadzaniswa senitrogen okisijeni kuparadzana gadziriro kuitira kuti dzirambe dziripo senitrogen yakatsiga. Panguva iyoyowo, ari Absorção de Água neshongwe kuti chinja, uchakurati- pacharwo chikamu gasi kuti undoraira adsorption shongwe, Absorção de Água shongwe ruoko rubatsiro wedzera, asiwo nezvaanoita okudzivirira pamubhedha, kutamba rinokosha chaizvo pakuita nedanho ebetsero midziyo basa rikurumidze.
Technical indekisi kuti senitrogen rokuita Machine:
Kuyerera: 3-1000Nm / h Chakachena: 95% -99,9995%
Dova pfungwa: asingasviki -40 cant C: chinjika kumanikidzwa idukusa 0.6Mpa
Technical unhu senitrogen rokuita Machine
1 musoro dzakawanda zvinoriumba, mhepo kugoverwa kufanana, kuti muderedze mukuru nokukurumidza dzedenga.
2 kuvandudza muitiro design, kushandiswa migumisiro yakanakisisa.
3 yakasiyana samolecular nomusero dziviriro matanho kuwedzera upenyu kabhoni samolecular nomusero.
4 njere nokupiringidza sakodzera senitrogen gasi midziyo kuitira chigadzirwa unhu.
5 Opsioneel senitrogen aibuda zvazvingava, otomatiki kudzora maitiro, kure kudzora hurongwa.
6 nyore kuti ishande, yakadzikama kuvhiyiwa, mukuru mwero kushandisa michina, anogona kuzadzisa unmanned oparesheni.
Makuriro Akaita kushandiswa senitrogen rokuita Machine:
Metal kupisa kurapwa kwacho rokudzivirira gasi, senitrogen gasi uye zvakasiyana-siyana matangi, makemikari indasitiri Mapaipi gasi yokunatswa, rabha, mapurasitiki zvigadzirwa kugadzira, zvokudya indasitiri chiutsi okisijeni itsva-anochengeta kavha, chinwiwa bhizimisi uye kufukidza gasi yokunatswa, mishonga indasitiri senitrogen senitrogen mhosva kavha uye mudziyo okisijeni chiutsi, zvemagetsi zvinoriumba uye yemagetsi kugadzirwa ari semiconductor indasitiri kwacho uye unodzivirira gasi. Kuchena, kuyerera uye kumanikidzwa zvinogona kugadziridzwa kuti zvinodiwa makasitoma zvakasiyana.
Previous: VPSA Vacuum Kwezvokudya Nemiti jenareta
Next: ZBO Kwezvokudya Nemiti jenareta
Mudziyo Natural Gas jenareta
Yakasimba Kwezvokudya Nemiti jenareta
Gas jenareta Plant
Hospital Kwezvokudya Nemiti jenareta
Natural Gas jenareta Power Plant
Natural Gas jenareta Set
Nitrogen jenareta Machine
Nitrogen jenareta Nitrogen Gas Plant
Okisijeni Gas jenareta
Plant Power jenareta Natural Gas
Plant Psa Kwezvokudya Nemiti jenareta
Portable Kwezvokudya Nemiti jenareta
Producer Gas Engine jenareta
Small Biogas jenareta